June 29, 2021 - ApannPyay Media
အနံပျောက်သူများ ကြက်သွန်နီဝါး၍ ခဏငုံထားပါ မွှန်လာပါလိမ့်မည် အရည်ကိုဖြည်းဖြည်း မျိုချ အနံရပါမည်
June 29, 2021 by ApannPyay Media
အနံပျောက်သူများ ကြက်သွန်နီဝါး၍ ခဏငုံထားပါ မွှန်လာပါလိမ့်မည် အရည်ကိုဖြည်းဖြည်း မျိုချ အနံရပါမည် အသက်ရူလမ်း ကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါပိုးများကို၁၅မိနစ်နစ်အတွင်း ချက်ချင်းသက်သာပြီးပိုးကအဆုတ်ထဲအထိ ရောက်သောအဆင့်ရင်ဘတ်အောင့်သောအဆင့် ထက်ကျော်ပြီး အသက်ရူလိုက်ရင်ဆန်ပြုတ်အိုးပွက်သလိုအသံထွက်နေရင်တောင်၃ရက်နှင့်ပျောက်ပါသည်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမရှိပါ အရမ်းလွယ်ပြီး ၁၅မီးနစ်အတွင်းကိုယ်တိုင်သက်သာသွားသည်ကို လက်တွေ့သိရှိနိုင်ပါသည်။ ဆေးနည်း ၁။အချင်း၂လက်မခန့်ရှိ ကြက်သွန်နီဥကြီးတလုံးကိုအခွန်ခွာ အလုံးလိုက်ရေဆေးပြီး ခပ်ကြီးကြီးကိုက်ပြီးဝါးလိုက်ပါချက်ခြင်းမျိုမချလိုက်ပါနဲ့ ပါးစပ်ပိတ်ဝါးနေစဉ်မျက်ရည်ကျလောက်အောင်ထွက်လာသောအခိုးကို ပါးစပ်မှအဆုတ်ထဲကို အဆုတ်ပြည့်အောင်စုတ်သွင်းလိုက်ပြီး၂စက္ကန့်၃စက္ကန့်ခန့်အသက်ရူအောင့်ထားပါ။ ပြီးရင်ပါးစပ်ပိတ်လျှက် ဖြေးညှင်းစွာ နှာခေါင်းမှပြန်ထုတ်ပါ။ပါးစပ်ထဲတွင်ကျန်နေသောကြက်သွန်နီဖတ်များကိုဆက်ဝါးပြီးထွက်လာသော အခိုးများကိုယခင်အတိုင်ဆက်လုပ်ပါ။အခိုးနည်းသွားရင် အဖတ်ရောအရည်ရောကို လည်ချောင်းအတွင်းဖြေးညှင်းစွာမျိုချလိုက်ပါ။အထက်ပါနည်းအတိုင်းတစ်လုံးလုံးကုန်သည်အထိ ဝါးပြီးအခိုးကိုစုတ်သွင်းနှာခေါင်းကမှုတ်ထုတ်လုပ်ပါ။ ကုန်သွားရင် ၁၅မီးနစ်အတွင်းရေသောက်ခြင်း အစာစားခြင်းမလုပ်ပါနဲ့ပိုးသေချိန်ပေးရပါသည်။ ၁၅မီးနစ်ပြည့်သောအခါသင်ခံစားနေရသော ချောင်းဆိုးခြင်း နှာချေခြင်းနှာခေါင်းရင်း အာခေါင်အောင့်ခြင်းလည်ချောင်းနာ ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်းများယူပစ်လိုက်သလို သက်သာတာကို ချက်ခြင်းတွေ့ရမည်။ မည်သည့်ဆေး မည်သည့်အစာနှင့်မျှမတည့်မရှိ၍ ခံစားရတာနဲ့ ချက်ခြင်းလုပ်ချက်ခြင်းသက်သာပျောက်ကင်းစေသည်ကဲဘယ်လိုလဲမယုံပါနဲ့အုံး အခုထလုပ်ကြည့်လိုက်ပါ။သက်သာရင် ၄နာရီခြားတခါလောက်ဝါး၍အဆုတ်ထဲရူသွင်းခြင်းကိုမပျောက်မခြင်းလုပ်ပေးပါ သာမာန်ပိုးဆိုရင်၂ခါ၃ခါဆိုပျောက်ပြီ။၄နာရီခြားဆိုရာဝယ် ပြင်းထန်သောပိုးများအတွက်သာဖြစ်၍သာမာန်ပိုးဆိုရင် လည်ချောင်းထဲ နှာခေါင်းထဲ သရိုးသရီဖြစ်လာမှသာဝါး၍အဆုတ်ထဲစုတ်သွင်းပါအလွန်မွှန်သောအခိုးဖြစ်လူတိုင်းမလုပ်ချင်ပါ။ရောဂါမဖြစ်ဘဲ မလုပ်ပါနဲ့အခိုးများထွက်သည့် ကြက်သွန်နီဆိုရင်ပိုကောင်း … Read more
အသားထိတာနဲ့ယောင်တတ်တဲ့အုန်းသီးကိုဆေးကုပေးနေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးအား ပရိတ်သတ်တွေပျော်ရွှင်စေဖို့တင်ပေးလိုက်တဲ့ ထူးခန့်ကျော်
အသားထိတာနဲ့ယောင်တတ်တဲ့အုန်းသီးကိုဆေးကုပေးနေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးအား ပရိတ်သတ်တွေပျော်ရွှင်စေဖို့တင်ပေးလိုက်တဲ့ ထူးခန့်ကျော် ပရိတ်သတ်ကြီးရေ…သရုပ်ဆောင် ထူးခန့်ကျော်ကတော့ အနုပညာဘက်တွင် ထူးချွန်ရုံသာမကဘဲ ခုနှစ်ရက်သားသမီးများ ခံစားနေရတဲ့နာကျင်ကိုက်ခဲမှုတွေကို သူတတ်ထားတဲ့ ဆေးပညာရပ်များဖြင့် ကုသပေးနေသူ တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့ အခကြေးငွေမယူဘဲ ကုသပေးနေတာ ဖြစ်ပြီး ခုနှစ်ရက်သားသမီးများ စေတနာဖြင့် ပေးသောငွေများကိုတော့ ဘုရားတည်တဲ့နေရာတွင် အသုံးပြုမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ထူးခန့်ကျော်ထံသို့ သာမန်ပြည်သူတွေသာမကဘဲ အနုပညာအသိုင်းဝိုင်းမှညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေလည်း လာရောက်ကုသလေ့ရှိပါတယ်။ မကြာသေးခင် နာရီပိုင်းလောက်ကလည်း ထူးခန့်ကျော်ရဲ့ လူမှုကွန်ယက်တွင် ဗီဒီယိုလေးတစ်ခု တင်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ ဆေးကုပေးနေရင်းနဲ့ ကက်ကက်လန်အောင် ပြန်ပြောနေတဲ့ လူရွှင်တော် အုန်းသီးကို ဗီဒီယိုရိုက်ပြီး ဆေးထိုးလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။အုန်းသီးဟာ အသားထိလိုက်တာနဲ့ ယောင်တတ်တဲ့ အကျင့်ရှိတာကြောင့်အခုလိုပုံစံ ဖြစ်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ထူးခန့်ကျော်ကလည်း ပရိသတ်တွေ ပျော်ရွှင်စေဖို့ ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကို တင်ပေးရခြင်းဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း အခုလို ရေးသားပြောပြထားပါတယ်။ ” ကျွန်တော်ရရက်သားသမီးများရဲ့ရောဂါဝေဒနာများကို အခမဲ့ပါရမီဖြည့်တဲ့အနေနဲ့ကုသပေးခဲ့ရာ လူနာပေါင်းမနည်းလှတော့ပေ။ထိုအထဲမှထူးဆန်းစွာဖြင့်ဘယ်လိုလူနာမျိုးနဲ့မှမတူညီသောဝေဒနာရှင်လေး … Read more
အစားလည်းဆေး၊ဆေးလည်းအစာ(လွတ်လပ်စွာမျှဝေနိုင်) မျှစ်သတိပြုသင့်သော ရောဂါများ ပြင်းထန်သောအစာအိမ်နာ၊csophageal varicose,သွေးပြန်ကြောရောဂါ၊အစာခြေလမ်းကြောင်းရောဂါ၊နာတာရှည်သွေးရောဂါnephritis,ကျောက်ကပ်ဆိုင်ရာမလုံလောက်သောရောဂါများ မစားသုံးသင့်ပါ။မျှစ်သည်ကယ်လစီယမ်နှင့်သွပ်ဓာတ်တို့ကိုစုပ်ယူမှုကိုတားဆီးသောကြောင့်သတိပြုသင့်သည်။သဘာဝသစ်ဥသစ်ဖုများကိုအသုံးပြု၍ သင်၏ ရောဂါဝေဒနာများ သက်သာပျောက်ကင်းလိုလျင် စောမျိုးမြင့်(တိုင်းရင်းဆေးသုတေသီ) B.A.(Psy.). D.B.S.,C. T. Med(yangon) မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းရင်းဆေးဆရာအသင်းဝင် တရုတ်တိုင်းရင်းသမားတော်အဖွဲ့ဝင် မြန်မာနိုင်ငံစာရေးဆရာအသင်းဝင် အမှတ်(67)ပထမထပ်,A2,မှန်ခန်း၊ပြည်တော်အေးလမ်း၊လေးထောင့်ကန်ရပ်ကွက်၊သဃ်န်းကျွန်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့။ Pho-09 5052028,09 785052028, 09 965052028.09695052028, (ဘဝမြင့်မှတ်တိုင်အကျော် စံပြစျေးAYAဘဏ်နောက်ကျောအနီး) အစားလည္းေဆး၊ေဆးလည္းအစာ(လြတ္လပ္စြာမၽွေဝနိုင္) မၽွစ္သတိျပဳသင့္ေသာ ေရာဂါမ်ား ျပင္းထန္ေသာအစာအိမ္နာ၊csophageal varicose,ေသြးျပန္ေၾကာေရာဂါ၊အစာေျခလမ္းေၾကာင္းေရာဂါ၊နာတာရွည္ေသြးေရာဂါnephritis,ေက်ာက္ကပ္ဆိုင္ရာမလုံေလာက္ေသာေရာဂါမ်ား မစားသုံးသင့္ပါ။မၽွစ္သည္ကယ္လစီယမ္ႏွင့္သြပ္ဓာတ္တို႔ကိုစုပ္ယူမႈကိုတားဆီးေသာေၾကာင့္သတိျပဳသင့္သည္။သဘာဝသစ္ဥသစ္ဖုမ်ားကိုအသုံးျပဳ၍ သင္၏ ေရာဂါေဝဒနာမ်ား သက္သာေပ်ာက္ကင္းလိုလ်င္ ေစာမ်ိဳးျမင့္(တိုင္းရင္းေဆးသုေတသီ) B.A.(Psy.). D.B.S.,C. T. Med(yangon) ျမန္မာနိုင္ငံတိုင္းရင္းေဆးဆရာအသင္းဝင္ တ႐ုတ္တိုင္းရင္းသမားေတာ္အဖြဲ႕ဝင္ ျမန္မာနိုင္ငံစာေရးဆရာအသင္းဝင္ အမွတ္(67)ပထမထပ္,A2,မွန္ခန္း၊ျပည္ေတာ္ေအးလမ္း၊ေလးေထာင့္ကန္ရပ္ကြက္၊သဃ္န္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ Pho-09 5052028,09 785052028, 09 965052028.09695052028, (ဘဝျမင့္မွတ္တိုင္အေက်ာ္ စံျပေစ်းAYAဘဏ္ေနာက္ေက်ာအနီး)
သွေးပေါင်ကျတတ်သူများ နှင့် ကျောက်ကပ်ရောဂါအတွက် မြန်မာဆေးစွမ်းကောင်းတစ်လက်
သွေးပေါင်ကျတတ်သူများ နှင့် ကျောက်ကပ်ရောဂါအတွက် မြန်မာဆေးစွမ်းကောင်းတစ်လက် သွေးပေါင်ကျတတ်သူများအတွက် လမ်းဘေးမှာအလေ့ကျပေါက်တတ်သည့်အပင်တစ်ပင်ရှိပါသည်။ထိုအပင်ကိုပုဇွန်စာရွက်လို့ခေါ်ပါသည်။ထိုင်ရာမှထလိုက်သောအခါ မူးသွားခြင်း၊ မျက်လုံးပြာသွားခြင်း စသည့်သွေးအားနည်းရောဂါခံစားနေရပြီး သွေးပေါင်ကျနေချိန်၌ ထိုအရွက်ကိုဘဲဥနဲ့ကြော်စားခြင်းဖြင့် တစ်ခဏချင်းသွေးပေါင်ကိုပြန်တက်စေပါသည်။ ရန်ကုန်တွင် မီးရထားသံလမ်းအနီးဘေး..ဝဲ..ယာ၌လည်းရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ အဖြူရောင်အပွင့်ငယ်လေးများပွင့်ပြီးအပင်၏အရှည်မှာတစ်ထွာတစ်ပေခန့်သာရှိပါသည်။ မှတ်ချက်။ ။သွေးပေါင်ပုံမှန်ရှိသူများမစားသင့်ပါ။သွေးတိုးပြီးမူးသွားပါလိမ့်မည်။ ွကိုယ်တွေ့ဆေးနည်းလေးမို့ ပြန်လည်မျှဝေကုသိုလ်ယူတာပါ ။ ။ Yimon Kyaw ( HTD) ကျောက်ကပ် ကျောက်တည်တာ ၊ သွေးပေါင်ကျတာတို့ ဖြစ်လျှင်… ပုစွန်စာရွက်က မြေပြင်မှာ ကပ်ပေါက်တဲ့ အပင်ငယ်တစ်မျိုးပါ။ အရွက်ချွန်ချွန်၊ အရိုးပွပွလေးနဲ့ အပွင့်ဖြူဖြူလေးတွေပွင့်ကြပါတယ်။ အာရှဒေသတော်တော်များများမှာပေါက်ရောက်ကြပါတယ်။ အရိုးက အနီရောင်လေး ရှိတတ်ပါတယ်။ စားလိုက်ရင် ကြွပ်ကြွပ်လေးနဲ့ စားကောင်းတဲ့ အရွက်လေး တစ်မျိုးပေါ့။ ဓါတ်တိုး ဆန့်ကျင် အာနိသင် ကြွယ်ဝတာကြောင့် ဘက်တီးရီးယားတွေကို တိုက်ထုတ်ပေးနိုင်ပြီး ဒီလိုလေး ဆေးဖက်ဝင်ပါတယ်။ အသက်ရှုလမ်းကြောင်းကို … Read more
မင်းကို အရမ်းချစ်ဖို့ ခနလောက် အချိန်ပေးပြီး ဖတ်လိုက်ပါ
မင်းကို အရမ်းချစ်ဖို့ ခနလောက် အချိန်ပေးပြီး ဖတ်လိုက်ပါ3မိနစ်လောက်ပဲ အချိန်ပေးပြီး ဖက်ပေးပါ…. သူက မင်းကို တစ်အားလည်းရစ်တယ် ။စိတ်ကောက်ရင်လည်း ခဏ ခဏပဲ ။သဝန်တိုတာလည်း အကြိမ်ကြိမ် ။ ဘယ်မှာလဲ ? ဘာလုပ်နေလဲ ?ဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေ နဲ့ မင်း ကို မေးနေ ၊ ပြောနေတာ ကို မင်း က သံသယ မျက်လုံးတွေ နဲ့ အကြည့်ခံနေရတယ် ဆိုပြီး မကြိုက်ဘူး။ အဲ့လို များ ထင်ရင် အကြီးကြီးလွဲပြီပေါ့ ။တစ်ခါတစ်ရံမှာ လူတွေက သိပ်ကို ချစ်မိသွားရင် အချစ်ကြီးလာတတ်ကြတယ် ။ အချစ်ကြီးပြီ ဆိုတာနဲ့ မင်းအပေါ်ထားတဲ့ စိတ်က ပေါ့ပေါ့တန်တန် မဟုတ်တော့ဘူး။လေးလေး နက်နက်ဖြစ်သွားပြီ … Read more
သူရိယနေဝန်းအကြောင်းကို အကုန်ဖော်လိုက်တဲ့ ပန်ဆယ်လို
သူရိယနေဝန်းအကြောင်းကို အကုန်ဖော်လိုက်တဲ့ ပန်ဆယ်လို မိုးဟိန်း – သူရိယနေဝန်း(အရင်သူရိယအလင်း) ဂျာနယ်ရဲ့ စစ်တပ်နှင့်ပတ်သက်သမျှအကြောင်းစုံကို ဖော်ထုတ်လိုက်တဲ့ ပန်ဆယ်လို ( မယားငယ် နာမည်တောင် အတိအကျနဲ့ကို ဖော်ထုတ်တာ……………..) ဒီနေ့တော့ မိုးဟိန်းဆိုတဲ့ စစ်အောက်ဆွဲ သူတောင်းစားကို စီးရီးလိုက် ဆွဲမှာ။ အရင်ဆုံး ဒီကောင့်ရဲ့ကိုယ်ကျင့်တရားကို ပြောပြမယ်။ ဘာလို့သိလဲဆိုတော့ မနေ့က ပွဲမှာ သူဝန်ခံသွားသလို ကိုယ်က သူCEO လုပ်တဲ့ သူရိယနေဝန်း(အရင်သူရိယအလင်း) ဂျာနယ်ရဲ့ အယ်ဒီတာ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ခဲ့ဖူးလို့ပဲ။ အဲ့အချိန်က ကိုယ့်အသက်၂၂နှစ်ဝန်းကျင်ပေါ့။ ၂၀၁၀ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရတက်လာတဲ့အချိန်မှာ ၈၈အရေးအခင်းမှာ ပြည်ပထွက်ပြေးခဲ့ရတဲ့ မြန်မာတွေကို ပြန်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်။ မိုးဟိန်းဟာ အဲ့ဒီ့အချိန်မှာ မြန်မာပြည် ပြန်လာခဲ့တယ်။ သူက ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ပါဆိုပြီး လူပိုသိအောင် ဦးကိုကိုကြီးတို့ဆီ အတင်းသွားတွေ့၊ ရုံးကို … Read more
ဘုရားပေးသည့့် ကိုဗစ် ကပ်ရောဂါ ကာကွွယ််ကုသဆေး
ဘုရားပေးသည့့် ကိုဗစ် ကပ်ရောဂါ ကာကွွယ််ကုသဆေး ရောဂါနှင့်် ဆေး ကိုဗစ် ကပ်ရောဂါ ကာကွွယ်ကုသဆေး ယနေ့ တိုင် မတွေ့သေးပါ။ ကမ္ဘာ့လူသားများ၏ ိစိတ်၌စွဲကပ်နေသော ရာဂ ဒေါသ မောဟ Virus ရောဂါ ကာကွယ် ကုသဆေးကိုနှစ်ပေါင်း နှစ်ထောင်ကျော်က ဗုဒ္ဓတွေ့ရှိ ဟောကြားခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ အနိစ္စသညာ အသုဘသညာ စိိတ်မှာလေ့ကျင့်မှုဖြင့် ရာဂ ကိုဖယ်ရှားပါ။ မေတ္တာပွါး၍ ဒေါသကိို ဖယ်ရှားပါ။အသိပညာဖြင့် မောဟ ကို ဖယ်ရှားပါ။ အပ်ပမာဒနေ သမ်ပာဒထေ။ ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော််ဒေါက်တာနန္ဒမာလာဘိိဝံသ ရွှေကျင်နိိကာဥပဥက္ကဋ္ဌ မဟာနာယက၊အဘိဓဇမဟာရဋ္ဌဂုရု ကျေးဇူးတော်ရှင်် ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ကြီး၏ ၂၃ ဧပြီ၊၂၀၂၀ ရက်နေ့ အဆုံးအမသြဝါဒ ၂၃ ဧပြီ, ၂၀၂၀ ဘုရားေပးသည္႔႔ ကိုဗစ္ ကပ္ေရာဂါ ကာကြြယ္္ကုသေဆး ေရာဂါႏွင့္္ … Read more
ငှက်ပျော စနစ်တကျ စိုက်ပျိုးနည်း
ငှက်ပျော စနစ်တကျ စိုက်ပျိုးနည်း ၁ ။ မြေအမျိုးအစား ငှက်ပျောသည် မြေအမျိုးမျိုးအပေါ်တွင်စိုက်ပျိုးဖြစ်ထွန်းသည်။ ငှက်ပျောစိုက်ပျိုးသောမြေသည် သဲနုန်းဆန်သောမြေသား၊ နုံးဆန်သော ရွံ့မြေသား၊ မြေချဉ်ငံဓာတ် ၆ မှ ၇.၅ အတွင်း စိုက်ပျိုးသင့်သည်။ ရွံ့စေးမြေ၊ သဲမြေ၊ ဆားပေါက်မြေ၊ ထုံးပေါက်မြေ မဖြစ်သင့်ပါ။ အစိုဓာတ်ရှိပြီး မြေဆီ မြေနှစ်ကောင်းရမည့်အပြင် ရေသွင်းရေထုတ် ကောင်းမွန်သည့်မြေဖြစ်ရမည်။ ဆားပေါက်မြေများတွင် မစိုက်ပျိုးသင့်ပါ။ ၂ ။ ရာသီဥတု အပူချိန် (၁၀ -၄၀)ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ်အတွင်းကောင်းစွာပေါက်ရောက်သည်။ ပျှမ်းမျှအပူချိန် (၂၆.၇) ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ်နှင့် လစဉ် မိုးရေချိန် (၁၀) စင်တီမီတာခန့်သည် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ဆီးနှင်းကျခြင်း သည် အပင်ကြီးထွားမှုကို ထိခိုက်စေသည်။ လေပူများပြင်းထန်စွာ တိုက်ခတ်ပါက ငှက်ပျောပင်များအား အနာတရဖြစ်စေသည်။ ထို့ကြောင့် … Read more
သောကြာသားသမီးတွေရဲ့ သိကောင်းစရာ (၁၁) ချက်
သောကြာသားသမီးတွေရဲ့ သိကောင်းစရာ (၁၁) ချက် 💓တစ်ယောက်ဆိုတစ်ယောက်ပဲ သစ္စာရှိရှိ ချစ်တတ်ကြတာ👉သောကြာ😃 💓ကိုယ့်ချစ်သူအပေါ်မှာအပြင်ပန်းက ဂရုမစိုက်သလို နေတတ်ပီး အမြဲတမ်းတွေးပြီးပူပန်ပေးတတ်တာ👉သောကြာ😃😃 💓ဝမ်းနည်းတတ်တဲ့စိတ်ကိုအပြင်ကိုထုတ်ပြလေ့မရှိပဲစိတ်ထဲကပဲ ကျိတ်ပြီးဝမ်းနည်းနေတတ်တာ👉သောကြာ😃 💓ဖြစ်လာသမျှအရာရာကို ရင်ဆိုင်ရဲသလိုဖြစ်မလာသေးတဲ့အရာတွေကိုလဲကြိုပြီးစဉ်းစားတတ်လေ့ရှိတာ👉သောကြာ😃 💓အပြင်ပန်းကြည့်ရင်မာနကြီးတယ်လို့် ထင်ရလောက်ပေမဲ့ တကယ်တမ်းပေါင်းကြည့်မှ ပေါတောတောလေးမှန်းသိရတာ👉သောကြာ😃 💓စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းကို မက်မောပြီး တခါတလေတစ်ယောက်ထဲပဲအေးအေးဆေးဆေးနေရတာကို သဘောကျတာ👉သောကြာ😃 💓စိတ်ရှုပ်ရမယ့်အရာတွေကို သိပ်မတွေးပဲ အမြဲတမ်း ပျော်ပျော်နေတတ်တာ👉သောကြာ😃 💓မသိတဲ့သူတွေနဲ့ဆို ရေခဲတုံးလို့ အရမ်းအေးပီး အရမ်းခင်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ကြားမှာဆို စက်သေနပ်ပစ်သလို မနားတမ်း လေပစ်တာ👉သောကြာ😃 💓သူတို့ရဲ့ ခံစားချက်တွေကို ဘယ်သူ့မှ ရင်ဖွင့်လေ့မရှိပဲ တျောက်ထဲဲ ရင်ထဲမှာအမြဲ သိမ်းထားတာ👉သောကြာ😃 💓လျက်ဝှက်တဲ့ နေရာမှာဆို ဘယ်နေ့နံနဲ့မှ မတူအောင် အရမ်းတော်လွန်းတာ👉သောကြာ😃 💓ကိုယ် ကိုယ်တိုင်က ဆရာကြီးမလုပ်ချင်သလို ကိုယ့်အပေါ် သူများဆရာကြီးလာလုပ်ရင်လည်း အသေမုန်းတာ👉သောကြာ😃 Credit- … Read more
ကောင်လေးတွေ ရုန်းမထွက်နိုင်တဲ့ မိန်းကလေးတွေရဲ့ ဆွဲဆောင်မှု (၆) မျိုး
ကောင်လေးတွေ ရုန်းမထွက်နိုင်တဲ့ မိန်းကလေးတွေရဲ့ ဆွဲဆောင်မှု (၆) မျိုး တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်နဲ့ ချစ်မှ စိတ်ဝင်စားမိတယ်ဆိုပေမယ့်လည်း လူ့သဘာဝအရ စိတ်ဝင်စားမိတယ်ဆိုတာမျိုး ဖြစ်စေတဲ့ အချက်တွေလည်း ရှိနေပါသေးတယ်။ အနေနီးရင် ချစ်မိသွားတတ်ကြတယ်ဆိုတာလည်း ဒီသဘောပါပဲ။ကောင်လေးတွေက ကိုယ့်ကို ကြိုက်အောင် ကြိုးစားအားထုတ်ကြသလို ကောင်မလေးတွေကလည်း ကောင်လေးတွေ ကိုယ့်ကို ကြိုက်အောင် လုပ်တာမျိုးတွေ ရှိနေပါတယ်။ စနှိုက်ကြော်တွေလည်း ပေါများလာတဲ့ ခေတ်ကြီးထဲမှာ မိန်းကလေးတွေရဲ့ ဘယ်လိုဆွဲဆောင်မှုလေးတွေက ကောင်လေးတွေဆီက စိတ်ဝင်စားမှုကို ရသွားစေလဲဆိုတာကို ဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်နော်။ အကြည့်ချင်းဆုံတာ အကြည့်ချင်းဆုံရင် ရင်ခုန်သည်လို့တောင် ဆိုစကားတွေ ရှိထားပါတယ်။ တကယ်လည်း ချစ်မှုရေးရာမှာ အကြည့်တစ်ချက်ကလည်း အရေးပါနေပါတယ်။ကိုယ့်ကို စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ပါနေတဲ့ မျက်လုံးမျိုးကို ဘယ်ယောင်္ကျားလေးမှ မခံနိုင်ကြပါဘူး။ အမြဲလိုလို သူ့ကို စိတ်ဝင်စားနေတယ်ဆိုတဲ့ အကြည့်မျိုးနဲ့ မျက်လုံးချင်း … Read more